Izinzuzo - Shineon Technology Co., Ltd.
Kusetshenziswa iresiphi ephezulu ye-phosphor kanye nobuchwepheshe bokupakisha, uShineon wayesekhiqize imikhiqizo yochungechunge lwe-spectrum yama-LED egcwele. Ubuchwepheshe busivumela ukuthi sithuthukise futhi sitshele i-SPD yokusabalalisa amandla kwe-LED emhlophe, ukuze sithole umthombo wokukhanya omuhle kakhulu ofanele izinhlelo zokusebenza ezahlukahlukene.
Ucwaningo lukhombise ukuhlangana phakathi kombala wemithombo yokukhanya nomjikelezo womuntu wokujikeleza.Ukulungiswa kwemibala kuzidingo zemvelo sekubaluleke kakhulu ekusetshenzisweni kokukhanyisa kwekhwalithi ephezulu.Ukukhanya okuphelele kokukhanya kufanele kubonise izimfanelo eziseduze kakhulu nokukhanya kwelanga nge-CRI ephezulu.
Ubude be-UV buvela ku-10nm kuye ku-400nm, futhi buhlukaniswe ngama-wavelengths ahlukene: indawo emnyama yejika le-UV (UVA) ngo-320 ~ 400nm; Imisebe ye-Erythema ultraviolet noma ukunakekelwa (UVB) ngama-280 ~ 320nm; I-Ultraviolet inzalo (UVC) ku-200 ~ 280nm band; Ku-ozone ultraviolet curve (D) ngo-180 ~ 200nm wavelength.
Ukusetshenziswa kwe-Shineon kobuchwepheshe obuphakeme be-hermetic, kudizayina uchungechunge lwemithombo emincane yokukhanya kwe-LED kulimo lwezolimo. Olunye uchungechunge lwephakethe le-monochrome kusetshenziswa i-chip eluhlaza okwesibhakabhaka nokubomvu (3030 no-3535 uchungechunge), kanti olunye uchungechunge lwe-phosphor olujabuliswa yi-blue chip (3030 no-5630 series). Uchungechunge lwe-Monochromatic light lunenzuzo yokusebenza kahle kwe-photon flux ephezulu
Njengendaba yenanoveli, amachashazi e-quantum (ama-QD) anokusebenza okuvelele ngenxa yobubanzi besayizi. Ukuma kwalokhu okubonakalayo kuyindilinga noma i-quasi-spherical, futhi ububanzi bayo busukela ku-2nm kuye ku-20nm. Ama-QD anezinzuzo eziningi, njenge-spectrum ebanzi yokuthakazelisa, i-spectrum encane yokukhipha, ukunyakaza okukhulu kwe-Stokes, impilo ende ye-fluorescent nokuhle
Umbala ophezulu we-gamut
Ngokuthuthukiswa kobuchwepheshe bokubonisa, imboni ye-TFT-LCD, ebisiphethe imboni yokubonisa amashumi eminyaka, iphonselwe inselelo enkulu. I-OLED ingene ekukhiqizeni ngobuningi futhi yamukelwa kabanzi emkhakheni wama-smartphones. Ubuchwepheshe obuqhamukayo obufana ne-MicroLED ne-QDLED nabo buqhubeka ngokugcwele.